19/07/2019 - 09:00 : JIRAMA:Hisy fahatapahana ny JIRO anio Zoma 19 jolay 2019 manomboka amin'ny: 9 ORA MARAINA ka hatramin'ny 3 ORA TOLAKANDRO eny Soavimbahoaka Fenoarivo. 9 ORA MARAINA ka hatramin'ny 04 ORA TOLAKANDRO eny Ambodiraotra Antsahabe. 9 ORA MARAINA ka hatramin'ny05 ORA HARIVA eny Andranomena Ankadikely. Antony : Fanatsarana ny kalitaon'ny fitsinjarana herinaratra izay tsy maintsy atao.
18/07/2019 - 16:00 : ANTENIMIERAM-PIRENENA:Fantatra izao fa solombavambahoaka avy ao amin'ny IRD avokoa ny filoha lefitra 6 andrafitra ny birao maharitry ny antenimieram-pirenena.
18/07/2019 - 15:30 : BAREA JIOI:Noraisin'ny ministra "coach": ministry ny totonlo iainana sy ny ekolojia ary ny ala ny BAREA JIOI; natrehan'ireo mpanohana : ETT, Ocean Trade, SMTP, Shalimar. Ary tamin'izany no nanoloran'izy ireo fanampiana mitentina: -4 millions AR(ETT) -2 millions AR (SMTP) -5 millions AR (Ocean Trade) -4 millions AR (Ministeran 'ny tontolo iainana)
18/07/2019 - 15:00 : JIRAMA:Tapaka hatriny omaly ny rano eny Andravoangy ka hatrany Besarety noho ny fanarenana ny fantsona lehibe iray ka ho vinavinaina ho vita anio alina izany,Ny JIRAMA dia maneho ny fialan-tsiny ny mety hgo fanelingelenana.
18/07/2019 - 14:30 : LALAO NY NOSY:amin'izao fotoana izao no hihazo an'ny Nosy Maurice ireo atleta malagasy andray anjara amin'ny lalao ny Nosy.
18/07/2019 - 14:00 : NTSAY CHRISTIAN:Anio no nametram-pialana ny praiminisitra Ntsay Christian.
18/07/2019 - 12:00 : TOAMASINA:Hametraka fanovana ny PDS Razafimanana.
18/07/2019 - 11:30 : IAVOLOHA : Hanao fanambarana lehibe anio maraina izao ny filohan'ny Repoblika, Andry Nirina Rajoelina eny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha. Efa tamin'ny 9 ora sy sasany ny mpanao gazety no nasaina tonga teny.
18/07/2019 - 11:00 : MANDELA DAY:Amin'izao fahatsiarovana an'i Mandela izao dia hanolotra fanomezana ho an'ny zaza kamboty tezaina ao amin'ny toby Manampisoa etsy Nanisana ny masoivoho ny Afrika Atsimo anio.
18/07/2019 - 10:30 : KITRA ANY FRANTSA:Tao ahorian'ny CAN dia nahazo fifanarahana vaovao i Jeremy Morel nifindra ao amin'ny Stade Rennais.
Archive du 20190320